Dagaalkii Kalshaale ee maanta oo geystay Khasaarihii ugu badnaa iyo Gen.Tani oo calooshiisa banaanka soo dhigay | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > ALL DARWIISH NEWS, WARARKA	> Dagaalkii Kalshaale ee maanta oo geystay Khasaarihii ugu badnaa iyo Gen.Tani oo calooshiisa banaanka soo dhigay
Monday, February 7, 2011 Laaska News
Feberuary 07,2011 Laaska News.
Buuhoodle – Dagaal aad uculus oo laysku adeegsaday tignikada iyo madaafiicda culus, ayaa ka dhacay deegaanada Kalshaale,Hagoogane iyo jiidaa Buuhoodle ee u dhaxaysa Qorulugud iyo Buuhoodle,dagaaladaas wuxuu dhexmaray ciidan beeleed kasoojeeda deegaanka Buuhoodle iyo Ciidanka Somaliland.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Ciidamo SSC iyo Somaliland.
Dagaalkan oo saaka aroortii bilawday ayaa labada dhinac ee dagaalamay ay qoloba qolada kale ku eedeynaysaa inay bilaabeen,sidoo kalana ay dhinac walbana ay sheeganayaan inay guushu raacday.
Waxaana lagusoo waramayaa in dhimashada,dhaawaca iyo dadka lakala qabsaday ay gaarayaan tiro aad ubadan,waxaana kasoobaxaya warar is khilaafsan.
Xagga Buuhoodle ayaa lagu soo waramayaa in khasaaraha dagaalkaa uu isa soo taraya iyadoo dhimashada markii hore lagu sheegay 6 ruux ay hadda dhimashada gaadhay 12 qof,halka dhaawacana lagu sheegay 13 qof dhawr iyo labaatan,sida uu BBC du usheegay Maxamed Sh.Cabdi Axmed Tuur,wuxuu kaloo intaa ku daray inay yihiin dadka deegaanka Buuhoodle .
Mr.Tuur ayaa sheegay in ciidanka Somaliland iyo shacabkooduba ay dagaalka ku jireen.
Mr. Tuur ayaa sheegay inay ilaa 63 ay kadileen xagga Somaliland,tiradan uusan raali kunoqon wariyihii su’aalaha weydiinayay.
Wuxuuse beeniyay in laga qabtay Maxaabiis.
Waxa kale oo uu beeniyay inaysan cidkale dagaalka kuwa helin,ayna difaacayaan dhulkooda.
Xagga Somaliland ta ruuxeeda ayaa qiratay inay dhinteen Afar askari kana dhaawacmeen 12 sida uu sheegay taliyaha ciidanka Soomaaliland Mr. Taani oo warbaahinta la hadlay.
Mr.Taani ayaa yidhi raggaa na soo weerarar waxay wateen kaarayaal,PM , artalari iyo madaafiic ayay wateen.
Waxaa kale oo uu Taliyahaasi ku eedeeyay in kooxo Alshabaab iyo dad Soomaaliland diid ahi ay isa soo uruursadeen oo ay soo weerareen,isagoo dagaalkii maanta dhacay ee reer Buuhoodle ku eedeeyay inay ku jiraan SSC iyo Alshabaab,isagoo SSC ku sheegay inay yihiin Budhcad.
Arrintaas oo laba nin oo u kalahadlay Buuhoodle oo midi yahay COL.Cali Xasan Sabaray oo ah Gudoomiye ku xigeenka SSC ayaa beeniyay inaysan jireen cid deegaanka kabaxsan oo dagaalkaa kula jirta Ciidanka Somaliland iyo shacabka lasocda.
MR.Sabaray ayaa ciidanka Somaliland inay shacab ay u adeegsadeen kaarayaal.
Mr. Sabaray oo wariyaha VOA waraystay ayaa weydiiyay arrinta Taliyaha Ciidamada Somaliland uu ku eedeeyay Alshabaab in uu dagaalka maanta ku weheliyeen,ayaa waxaa Mr. Sabaray dusha kasaaray inay raggaasi ay la joogaan iyaga,jaagaana burco kana dagaalameen Buuraha bariga.
Mr.Taani oo reer buuhoodle la hadlaya ayaa sheegay in haddii ay nimankaa iska saari waayaan inay dhibatadeedu imanayso.
Isku soo wada duuboo waxaa muuqata in dagaalkii maanta uu keenay khasaare weyn oo dhimasho iyo dhaawac ba leh.
Waxaanse la yaabay “Alshabaab ayaa ku jira” in Gen. Tani kasoo yeerto.
Waxaan usoo jeedinayaa in odayaasha dhaqanka ee Buuhoodle ay Bayaan ka soo saaraan warkaa Gen. Tani kasoo yeeray,colaadana aan heerkaa lagaarsiin.
Taliye Taani Madareemi kara waxay keeni karto kalmadda ah in reer Buuhoodle ama qabiil dhan oo deggan,dhulka uu iasgu sheeganayo uu leeyahay GEN. kii ciidamadaan ahay “waa somaliland” in uu ilaa xadka uu yiraahdo kooxo kale iyo Alshabaab ayaa ku jira.
Iyadoo la og yahay inta is dagaalaysa ay yihiin dad isaga iska badiya oo wiil iyo abtigii ah ama seedi iyo deegaan wadaag ah,waligoodna ay isdilayeen oo ay haddana heshiinayeen,haddase Buuhoodle ay gashay aqoonsigii .
Mudada uu dagaalkaas socday ayaa xitaa waxaa qolana sheegeen inuu dagaalku socday 5 saacadood,qolada kalena ay yiraahdeen wuxuu socday 7 saacadood.
Dhinaca kale dagaaladan ayaa dhammaan deegaanada Laascaanood , Buuhoodle iyo Nugaal ba saameeyay.
Galabta dagaal kale oo laysku adeegsaday qoryaha culus ayaa ka dhacay deegaanka gambadhe oo ay isaga hor yimaadeen ciidanka Somaliland iyo ciidan lagu sheegay puntland oo ay weheliyaan ciidan beeleed ka soo jeeda Sool.
Wax khasaaraha ilaa hadda lama soo sheegin iyada oo uu istaagay dagaalkaas,ciidankaas weerarka soo qaadayna ay ku noqdeen barahoodii.
Rasaasta aagga Gambare ayaa walaac ku abuurtay deegaanadaas oo dhan,waxaana rasaastaa laga maqlay Magaalada Laascaanood,sida uunoo xaqiijiyay Goobjooge kusugan Laascaanood.
Gambare ayaa waxay udhaxaysaa Laascaanood iyo Tukaraq.
Xaaladdan colaadeed ee kasoo cusboonaatay deegaanada Beesha Sool ayaa waxay leeyihiin ujeedooyin kala duwan oo abuuraysa colaad saamaysa dhammaan Waqooyiga Soomaaliya,keenaysana colaad beeleed haddaan xikmad iyo caqli la isticmaalin xalna laga gaarin deegaanada laysku haysto iyo dhulka lakala sheeganayo.
War Deg deg ah: Puntland oo Weerar Kadis ah Ku dhardhaartay aagga Laascaanood
War DegDeg ah:Dagaal ka socda Kalshaale iyo Puntland oo maagan dhabar jabin & Fartiin ku socota Siilaanyo
Tags: Buuhoodle, kalshaale, Muqdisho, News, PUNTLAND, Somaliland, Soomaaliya, tribal conflict
Buuhoodle Xagay ku taal? War Deg deg ah: Puntland oo Weerar Kadis ah Ku dhardhaartay aagga Laascaanood -Gambadhe,Kadibna waxay ku noqdeen Deegaanadoodii hore ay ka soo duuleen